असफल हुँदै ओली सरकार | Nagarik News - Nepal Republic Media
जब–जब भारतले कालापानी क्षेत्रमा (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरेको गतिविधि सार्वजनिक हुन्छ तब–तब हामी तात्छौँ । सबैभन्दा पहिला नागरिक सडकमा उत्रन्छन् । त्यसपछि विपक्षी दलहरूका नेता तात्छन् । नारा जुलुस केही दिन÷हप्ता निरन्तर चलिरहन्छन् । त्यसमा छलफल र बहसहरू व्यापकरूपमा हुन थाल्छन् । भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन हुन्छन् । तिनीमाथिको दमनमा सरकार उत्रन्छ । नागरिक गिरफ्तारीमा पर्छन् । सदन तात्छ । अनि सरकारले विज्ञप्ति निकाल्छ । भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाइन्छ । भारतीय सरकारलाई औपचारिक ‘कूटनीतिक नोट’ हस्तान्तरण÷पठाउने काम हुन्छ । जवाफ आएको थाहा पाईंदैन । संसद्को ‘पोडिएम’ मा उभिए पराष्ट्रमन्त्री संवेदनशीलता दर्शाउँदै भाषण गर्छन् । प्रधानमन्त्री कसैको एक इन्च जमिन नलिने र लिन पनि नदिने कुरा गर्छन् । समस्या समाधानका पहल तत्काल गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर नभएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा ‘अब्जेक्सन’ (आपत्ति) गर्न सकेन । ‘रिग्रेट’ (खेद प्रकट) गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ ।
अर्कातिर सरोकारवाला भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थिएन भनेर नेपालको मुद्दा कमजोर पार्ने गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको विषयले संसद्मा खैलाबैला मच्चायो । तथापि पदीय जिम्मेवारी विपरित अभिव्यक्ति दिए पनि उनको मन्त्री पद सुरक्षित छ÷रहनेछ । त्यस अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षामा कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग भएको प्रमाण जुटाउन लागिपरेको संसदीय समितिलाई उनले बताइन् ।
तर उनको यस भनाइका विपरित त्यस क्षेत्रका विषयमा जिताजाग्ता जानकार र प्रमाणहरूसमेत बोकेर बसेका भैरव रिसाल भन्छन्– हामीसँग भएका प्रमाण लिन सरकारले एकपटक पनि सम्पर्क गरेको छैन । उनीसमेत अभियानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा बनाएर सरकारलाई केही महिनाअघि बुझाएका थिए । नागरिक अगुवा पद्यरत्न तुलाधरको संयोजनमा भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, चैतन्य मिश्र, श्याम श्रेष्ठ, चेतन्यजंग हिमाली, कपिल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र केसी, मंगलसिद्धि मानन्धरलगायत ३९ जनाले दिन÷रात खटेर मुलुकभित्र नभेटिएका प्रमाण विदेशमा फेला पारेर भए पनि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ थन्किएको छ ? नागरिक स्तरमा लामो समयदेखि सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन भएका प्रयासलाई सरकारले सुदृष्टिले किन हेर्न चाहेको छैन ? विचारणीय छ ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि २०७६ साल मंसिर २ गते मैले यही पत्रिकामा ‘कालापानी : ओलीलाई अर्को अवसर’ भनेर एक लेख लेखेको थिए । उनको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीविरुद्धको चट्टानी अडानका कारणबाट चुनावमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दोस्रो कार्यकालमा पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूले थाती राखेका सीमा समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने स्वर्णिम अवसर पाएका छन् भनेर लेखे । तर त्यसपछिका घट्नाक्रमले ‘गेम चेन्जर’ हुने अवसर तिनले गुमाउँदै गएको देखिन्छ । छिमेकीले आफ्नो भूमिमा लामो समयदेखि बाटो खन्दै आएको थाहा प्रमलाई नहुनु भनेको, यदि यो सत्य हो भने मुलुकमा थप जटिलता निम्तने देखिन्छ । यसबाट ओली सरकारको शासन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
तर यसो भनिरहँदा नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेका छैनन् । लकडाउनको अवस्थामा पनि मुलुकभित्र र बाहिर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएका छन् । चौतर्फीरूपमा सरोकार । तथापि हामीले आक्रोसमा आफ्नो होस गुमाउनु भने अवश्य हुँदैन । किनभने कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आफूमात्र होइन अरुलाई पनि जोखिममा पार्ने परम्परागत विरोध भन्दा फरक शैलीबाट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अन्तमा, यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण होला/नहोला तर चीनको यसमा के÷कस्तो भूमिका रहला ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०८:०७ बिहीबार
भूमि अतिक्रमण सीमा सुरक्षा